Milina fanontam-pirinty hafanana, milina fanodinam-pana vita amin'ny lamba, milina fanaovan-gazety - Asiaprint
Manan-tsaina Control Jersey Calandra Roll Heat P ...
1.7m Width Calendar lamba famindrana hafanana Press ...
70 × 90 Big Size Jersey Sublimation Workta roa ...
Niorina tamin'ny 2016, Guangzhou Asiaprint Industrial Co., Ltd. dia nanjary mpitarika ny haitao fanindriana hafanana press. Manome milina famindrana hafanana izahay, milina fanontana sublimation, milina fanontam-pirinty DTF, milina fanodinana, masinina embossing, fanamainana, taratasy fanoratana, ranomainty sns. ny fenitry ny mpanjifanay.
Ny fanampiana ara-teknika an-tserasera dia azo omena ara-potoana
ary ny mpiasa dia ho faly tokoa hanampy anao.
Izahay no mpitarika ny milina fanaovan-gazety eto Shina.
Ny milina fanontam-pirintintsika dia voamarina CE.
Manome serivisy an-tserasera izahay 24 ora isan'andro, 7 andro isan-kerinandro.